Sat, Aug 24, 2019 | 10:32:02 NST
कांग्रेसको राम्रो प्रभाव रहेका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा समेत उसले हार व्यहोर्नु पर्‍याे । कांग्रेसको नेतृत्व तह कमजोर हुँदा पार्टीले पराजय भोग्नु परेको भन्दै पार्टीका युवा नेताले यसको विरोध गरे ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्दा डिभी पिआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई जागिर छाड्न वा डिभी पिआर त्याग्न बाध्य बनाएका मन्त्री पण्डितसँग गरिएको कुराकानी:
सबै टिमले फ्रेस स्टार्ट गर्नुपर्छ : कप्तान पारस खड्का
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टू बिहीबारदेखि नामिबियामा सुरु हुँदैछ । नेपालले प्रतियोगिताको यात्रा घरेलु टिम नामिबियाविरुद्धको खेलबाट सुरु गर्दैछ ।
देउवा सरकारको निर्णय ओली सरकारको पहिलो बैठकबाटै खारेज हुनुपर्छ :सुरेन्द्र केसी
बहिरगमन हुन लागेको सरकारले आफ्नो पछाडि जनमत छैन भने दूरगामी महत्वको निर्णय गर्नु हुँदैन । दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने भन्ने त सोच्न पनि सकिँदैन । देउवा सरकारको काम नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्ने मात्र हो ।
‘अब नेपालले ढुक्कका साथ इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने भयो’
काठमाडौं, पुस २८ – स्थलमार्गबाट हुने इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतामा नेपाल चीनसँग जोडिएको छ । शुक्रबारदेखि नेपाल चिनियाँ बाटो हुँदै इन्टरनेटको विश्व सञ्जालमा जोडिएको हो ।
​राजकुमार ह्यारीको बिहेको मिति तोकियो
पुष १ –बेलायतका राजकुमार ह्यारी र मेघान मार्कलको बिहेको मिति निश्चित भएको छ ।
जेठ २६ – कतारका विदेश मन्त्रीले आफ्नो विदेश नीतिमा कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको बताउनु भएको छ ।
पहिलो चरणमा चुनाव भएका २ सय ८२ स्थानीय तहका प्रतिनिधीले सपथ ग्रहण गरेर काम थालिसकेका छन् । २० वर्षपछि नयाँ स्वरुपमा चुनिएका प्रतिनिधीले धमाधम बृद्धभत्ता बढाउने, एउटा कामको लागि आएको बजेट अर्कै काममा लगाउने, महंगा सामान किन्ने, नयाँ गाडीमा हुँइकिने जस्ता काम पनि गर्न थालेका छन् ।
फ्रान्स राष्ट्रपतीय चुनावः पहिलो चरणमा म्याकरोन र पेन अघि
वैशाख ११ – फ्रान्सको राष्ट्रपतिय चुनावको पहिलो चरणमा मध्यपन्थी इम्यानुएल म्याकरोन चुनावमा अगाडि रहेको देखाएको छ । यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री फ्रास्वाँ फिलोंलाई पछाडि पार्दै नेशनल फ्रन्टकी मारिन ल पेन दोश्रो स्थानमा रहेको बिबिसीले जनाएको छ ।
प्रहरीले बर्दी शो अप गरेपछि अपराधीले टाउको उठाउन पाउँदैन – एसएसपी पिताम्बर अधिकारी
समयक्रम सँगसँगै अपराध गर्ने प्रवृति र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय विकास भएको विभिन्न प्रविधिको प्रयोगका कारण अपराध गर्ने बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ ।
भदौ २४ – उत्तर कोरियाले आणविक बम परिक्षण गर्दा ५ दशमलव ३ म्याग्नेच्युटको भूकम्प गएको छ । अमेरिकाको भौगोलिक सर्भे अन्तर्गतको ग्लोबल भूकम्पीय मापन केन्द्रले शुक्रबार बिहान मापन गरिएको ठूलो कम्पन भुकम्प नभएर आणविक बम परिक्षण पछिको कम्पन भएको पुष्टि गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकार म्याकोन फिलिप्स अहिले नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्युरो अफ इन्टरनेशनल इन्फरमेसन प्रोग्राम्सको संयोजकको रुपमा उहाँले काम गरिरहनुभएको छ । स्टेट ब्युरो अफ इन्टरनेशनल इन्फरमेसन प्रोग्राम्सले सार्वजनिक कुटनीति अन्तर्गत विदेशी नागरिकलाई अमेरिका तथा अमेरिकी नीतिबारे जानकारी दिने काम गर्दछ ।
​कोलम्बियन सरकार र फार्क विद्रोहीबिच युद्धविराम सम्झौता
असार १० – कोलम्बिया सरकार र त्यहाँको फार्क विद्रोहीबिच युद्धविराम सम्बन्धी ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै ५० वर्षदेखिको द्वन्द्व अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
गाडी भाडा र मौका मात्र दिए हुन्छ, म बाँचुञ्जेल पढाइदिन्छु : लालदेउसा राई
कलम र दिमागलाई जति तिखार्यो, त्यति तेजिलो हुन्छ । यही मान्यतामा विश्वास गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा पत्रकार लालदेउसा राई अझै शिक्षण पेशामा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
सिरिया शान्ति वार्ता रोकियो
माघ २१ – स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा भएको सिरिया शान्ति वार्ता तत्कालका लागि रोकिएको छ । सिरियामा गएको पाँच वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा भएको वार्ता तत्कालका लागि रोकिएको हो ।
सँधैंजसो टेलिफिल्मको छायांकनमा व्यस्त हुने हाँस्य टेलिश्रृंखला मेरी बास्सैका कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) वैशाख १२ को भूकम्पपछि कहिले कुटो, कोदालो लिएर नुवाकोट त कहिले त्रिपाल लिएर काभ्रे पुगे । महाविपत्तिमा परी जनधन गुमाउने परिवारहरुको राहत वितरणका लागि धुर्मुस विभिन्न संघसंस्था गुहार्दै हिँडिरहेका छन् ।
​समुन्द्रमा फसेका आप्रवासी पिसाव पिउन बाध्य, खाना र पानीकाे अभावमा १० जनाकाे मृत्यु
जेठ १ – आन्दमान समुन्द्रमा फसेका म्यानमारका १० आप्रवासीको खाना र पानीको अभावमा ज्यान गएको छ । समु्न्द्रको किनारामा एक हप्तादेखि डुङ्गामा बसिरहेका १० जनाको ज्यान गएपछि अरुले पिसाव संकलन गरेर खान थालेका बिबिसीले जनाएको छ ।
वार्ताका लागि मात्र वार्ता गर्दैनौं : उपेन्द्र यादव
पेलेरै जाने हो भने हामीले पनि त्यही अनुसार हामी पनि तयारी गर्छौ । वार्ताका लागि पनि हामी तयार नै छौ । त्यसैले वार्ताको वातावरण उहाँहरुले बनाए वार्ता नबनाए आन्दोलन हाम्रो त एजेण्डा स्पष्टै छ नि ।
संविधान बैशाख ११ वा जेठ १५ मा : गगन थापा
दलहरुले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार माघ ८ मा संविधान नआउने पक्का भैसकेको छ । संविधान नआएपनि माघ ८ मा साझा सन्देश दिने तयारीमा रहेका नेताहरुबीच कुरा मिल्न बाँकी छ । यसै सन्दर्भमा उज्यालो अनलाइनका लागि साथी लक्ष्मण कार्कीले कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासित कुराकानी गर्नुभएको छ ।
सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई कालो सूचीमा राख्छौ : अनुपराज शर्मा
झण्डै १३ महिनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीस अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा आयोगका पदाधिकारीले काम थालेको एक महिना हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा उज्यालो अनलाईनका लागि लक्ष्मण कार्कीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासंग गरेको कुराकानी :
साँचो बनाउँदैछौं, मिल्ने बित्तिकै क्लिक्क भएर एक सेकेण्डमा खुलिहाल्छ : डा. भट्टराई
संविधानका मुख्य विवादित विषयमा दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । फेरि पनि विवाद मिलाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नै जिम्मा पाएको छ । माघ ८ मा संविधान ल्याउनेगरी भैरहेका प्रयास र सहमतिको सम्भावनाबारे सहकर्मी मिलन तिमिल्सिनाले समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :
कांग्रेस र एमालेको नाकमा सुथरी लाएर प्रचण्डले लतार्न खोज्दैछन् : चित्रबहादुर केसी
कांग्रेस र एमालेलाई नाकमा सुथरी लाएर लतार्ने र यही संयन्त्रबाट लतारेर आफ्नो दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्न बनाएको संयन्त्र हो । प्रचण्डको मात्र होइन, यसमा अरुको पनि खेल हुन सक्छ ।
महिलालाई विदेश पठाएर पुरुषले घर धान्दा....
चुलाचौकोमा सिमित नेपाली महिला धन कमाउन सात समुन्द्र पारी पुगेका छन् । महिलाको सट्टा चुलोचौका र घरव्यवहार सम्हाल्ने काम पुरुषले गर्न थालेका छन् । तर, कुरा काट्ने मान्छेको खाँचो छैन हाम्रो समाजमा । यिनै सेरोफेरोमा साथी रीतु थेबेले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाका कारण फेरिएको चालचलनबारे मानवशास्त्री डा. जनक राईसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
सर्वसम्मति हुँदैन, त्यसैले पर्खेर बसिंदैन – माधवकुमार नेपाल
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ । समितिले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन । यसबिचमा सहमतिको सम्भावना कस्तो छ ? साँच्चै माघ ८ गते संविधान आउला ? उज्यालो अनलाइनका लागि मिलन तिमिल्सिनाले नेता नेपालसँग गरेको कुराकानी :
जनयुद्धको प्रक्रियामा हामीले पनि धोका खायौं, हार्‍यौं : मोहन वैद्य
माघ ८ गतेभित्र संविधान घोषणा गर्ने संविधानसभा र दलहरुको प्रतिबद्धता छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेकपा–माओवादीको भूमिक के हुन्छ ? माओवादीको अबको बाटो के ? यसै विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि मिलन तिमिल्सिनाले नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसँग गरेको कुराकानी :
सभासद देख्नुभयो भने काठमाडौं पठाउनुहोस्–नेम्वाङ
संविधान घोषणा हुने तिथि माघ ८ गते आउन अब ४ महिना र केही दिन मात्र बाँकी छ । अबको झण्डै चार महिनामा संविधान निर्माण कसरी संभव होला ? संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्नु हुन्छ : जिल्लामा रहेका सभासदहरुलाई काठमाडौं पठाउनुहोस् । संविधान निर्माणमा लाग्न भन्नुहोस् । त्यसैले पहरेदारी कायम राखौं । माघ ८ गतेभित्र संविधान बन्छ ।
मुख्य तीन राजनीतिक दल र नेकपा–माओवादी सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । सर्वपक्षीय सम्मेलनले संविधान निर्माणमा कसरी सहयोग गर्ला त ? उज्यालो अनलाइनका लागि साथी मिलन तिमिल्सिनाले नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुषालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
हिउँ पग्लिन थाल्यो, छिटै आइसब्रेक हुन्छ : बाबुराम भट्टराई
भदौ २१ भित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संवाद त गरिरहेको छ । तर मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । समिति सभापति डा. भट्टराईसँग उज्यालो अनलाइनका लागि मिलन तिमिल्सिनाले कुराकानी गर्नुभएको छ :
प्रचण्डजी आउनुहुन्छ भनेर भनेका थियौं, बाबुरामजी आउनुभयो । त्यसलाई पनि हामीले सहज ढंगले स्वीकार गर्यौं । संविधानसभाले बनाएको जुन कार्यतालिका छ, त्यो कार्यतालिका अनुसार माघ ८ गतेमा संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्था छ । हेरौं हाम्रो प्रयास कति सफल हुन्छ, हुँदैन ।
बाढी पीडितको पीडा – खान नपाएरै मरिने भो
बबई र कर्णाली नदीमा आएको बाढीले बर्दियाको दर्जनभन्दा धेरै गाविस र गुलरीया नगरपालिका डुबायो । बाढीपछि खाने बस्ने ठेगान नहुँदा बाढी पीडितको बिचल्ली भएको छ । यस्तै परेकी बनियाभार गाविस ६ बेल्वाबज्याकी सुमित्रा थारुसंग उज्यालो अनलाइनका लागि बर्दिया सहकर्मी भावुक योगीले गरेको कुराकानी:
असोजको अन्तिम हप्तासम्म संविधानसभाले आफ्नो मस्यौदा तयार गरिसक्ने कार्यतालिका छ । यस्तो अवस्थामा संविधान कसरी बन्छ र अहिलेसम्मको प्रगति के हो ? यसै सन्दर्भमा उज्यालो अनलाइनका लागि साथी बोमलाल गिरीले संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य गगन थापासँग गरेको कुराकानी: